Somaaliyaa fi Keeniyaan Hariiroo Isaanii Laaffatee Ture Cimsachuuf Walii Galan
Hagayya 09, 2021
Jilli Keeniyaa ministeera dhimmootii alaa Raychelle Omaamoon hoogganame, muummicha ministeeraa Somaaliyaa Mohamed Husen Roblee waliin mari’atee jira.
Mootummaan Keeniyaa fi kan Somaaliyaa dilbata darbe hariiroo dipilomaasummaa gidduu isaanii hammaatee ture fooyyessuuf walii galan. Mohammed Kaahiyyee bakka mariin sun itti geggeessame Moqadishoo irraa gabaaseera.
Akka weajajira muummicha ministeeraa bira ibsa kennameetti, biyyoonni hollaa kanneen hariiroon isaanii baatilee hedduuf hagas cimaa hin ta’in hariiroo isaanii keessumaa dipilomaasummaa, daldalaa fi nageenya ilalachisee jabeessuu irratti walii galaniiru. Ibsi sun itti dabaluu dhaan prezidaantiin Keeniyaa Uhuuruu Keeniyaattaa muummichi ministeerichaa Naayiroobii akka daawwatan affeeraniiru.
Keeniyaan mana murtiin ala dhimmi isaa furmaata akka argatu gaaffii hedduu kan dhiyeessite ta’us, Somaaliyaan falmiin galaanaa biyyoota lamaan gidduu jiru mana murtii yakka qoratu kan The Hague jiruun akka murtaa’u cimsitee dubbatte.
Moqaaadishoon Muddee wagaa darbee hariiroo diplomaasummaa Keeniyaa waliin jirtu addaan kutuu dhaan Keeniyaan dhimma siyaasaa Somaaliyaa keessa jidduu seente jechuun yoo qeequ Naairoobiin himannicha isaa haalee jira. Xiinxalaa kan ta’an Alii Abdulkaadir akka jedhanitti,warreen Keeniyaa daawwannaa kana geggeessuun, gama lamaaniituu dhimmootii cimaan jiraatan iyyuu, hariiroon isaanii fooyya’uuf mallattoo dha.